တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များမှ ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် ဖိတ်ကြားစာ ဖြစ်ပါသည်ခင်ဗျာ . . .
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေမှ ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် ဖိတ်ကြားစာ ဖြစ်ပါသည်ခင်ဗျာ . . .
ရန်ကင်းတောရကျောင်းတွင် ရှေးအစဉ်အလာအတိုင်း ဝိပဿနာတရားစန်း Winter retreat ကို ဒီဇင်ဘာလ(၂၀)ရက်နေ့ ညနေတွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ အချိန်ပြည့်ယောဂီအဖြစ် ရပ်နီးရပ်ဝေးများမှ လူငယ်နှင့် လူလတ်ပိုင်းများကို စိစစ်ကာလက်ခံထားပြီး အချိန်ပိုင်း ယောဂီမှာကျောင်းမှ သံဃာတော်များ၊ သီလရှင်ဆရာလေး များနှင့် ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ ဖြစ်ပါသည်။ ရန်ကင်းတောရ ပရိယတ် ပဋိပတ်ဌာနတွင် ယနေ့ ယောဂီ စုစုပေါင်း(၃၀)ဦး တို့သည် အချိန်ပိုင်းနှင့် အချိန်ပြည့် (၁၀)ရက် တရားစခန်းဝင် အားထုတ်လျှက် ရှိပါသည်။ ရန်ကင်းတောရ ပရိယတ် ပဋိပတ်ဌာန နေပြည်တော်ယဉ်ကျေးလိမ္မာစင်တာ...
​နှစ်​ပတ်​လည်​အ​စည်း​အ​ဝေး​သို့ ​စာ​တမ်း​များ​တင်​သွင်း​နိုင်​ရန် ​ဖိတ်​ခေါ်​အပ်​ပါ​သည်
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးလိမ္မာပြန့်ပွားရေး ဗဟိုအဖွဲ့ခွဲ(၁)၏ ဓမ္မကျောင်းတော်များ နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေး(၂၀၁၅) တွင် တင်သွင်းမည့် စာတမ်းခေါင်းစဉ်များကို အောက်ပါအတိုင်း ကဏ္ဍသုံးခု ခွဲခြားထားပါသည်။ (၁) ယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်းများ နိုင်ငံတစ်ဝန်း ကျယ်ပြန့်စွာ ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး ဆိုင်ရာစာတမ်း (၂) ယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်းများအတွက် ခေတ်မီပြီး ထိရောက်သည့် သင်ကြားရေးဆိုင်ရာစာတမ်း (၃) ယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်းများ ရေရှည်တည်တံ့ရေးဆိုင်ရာ စာတမ်းများကို ကဏ္ဍအလိုက် သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်တွင် အကျွမ်းတဝင်ရှိပြီး အတွေ့အကြုံ ရှိသူများက ရေးသားတင်သွင်းနိုင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ဤကဏ္ဍ (၃)ခုအနက် မိမိနှစ်သက်ရာ ကဏ္ဍအတွက် စာတမ်းရေးသား တင်သွင်းခွင့် ရှိပါသည်။ စာတမ်းတင်သွင်းရန် စိတ်ပါဝင်စားသူတိုင်း တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့လိုက်ဖြစ်စေ ရေးသားတင်သွင်းနိုင်ပါသည်။ စာတမ်း၏အောက်ခြေ၌ ရေးသားသည့် ပုဂ္ဂိုလ် (ဝါ) အဖွဲ့အစည်း၏ အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊...